I-La Feuilleraie - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguVeronique
I-Chantilly, embindini, phakathi kwesikhululo setreyini kunye nenqaba, ethe cwaka kwindlu enomtsalane nenomtsalane, siyakwamkela kwigumbi elincinci elinendawo yelayibrari, idesika eneWiFi kunye namaxwebhu ommandla wethu omhle, ithobhi labucala elinokugcinwa kunye namathuba okusela kunye nezimuncumuncu. Igumbi lokuhlambela elinokusetyenziswa nangabanye abantu kunye nendlu yangasese xa ufika. ikhitshi ELIBALULEKILEYO elifumanekayo.
FUNDA INDLELA YOKUNGENA KWEENDWENDWE
Indlu entle kwisitrato esincinci esithuleyo kwimizuzu eyi-5 ukusuka kwisikhululo setreyini, iivenkile kunye neevenkile zokutyela.
Indawo yokupaka esesitratweni (irekhodi)
Ihlathi elikumgama wemizuzu eyi-2 kunye neendawo ezinomtsalane kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo: Inqaba, Imyuziyam Yokuhlala Yamahashe nePheasantry Park imizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo kwindawo entle.
4.84 out of 5 stars from 205 reviews
4.84 · Izimvo eziyi-205
Ifumaneka kwimizuzu eyi-5 ukusuka kwisikhululo setreyini nemizuzu eyi-5 ukusuka kwiivenkile kunye neevenkile zokutyela.
Ihlathi elikumgama wemizuzu eyi-2 kunye neendawo ezinomtsalane ezikumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo kwindawo entle kwi-Racecourse: Inqaba, Izitishi ezinkulu kunye neMyuziyam i-Cheval, iPheasantry Park.
Indlu yethu ikwisitrato esincinci esipholileyo embindini wedolophu esinendawo yokupaka elula nesimahla.
Umbuki zindwendwe ngu- Veronique
Njengendalo enobubele, ndiyathanda ukudibana neendwendwe zam
ukuzenza zizive zikhululekile ekhayeni lethu
Kodwa ke, izinto esizenzayo ezisemgangathweni azisivumeli ukuba sibekho ngendlela ebesinokuthanda ngayo, kodwa senza iindwendwe zethu zizive zisekhaya.
Nangona kunjalo, ndiyazihlonipha iimvakalelo zomntu wonke.
Kodwa ke, izinto esizenzayo ezisemgangathweni azisivumeli ukuba…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chantilly